Ama-SA U19 alungele ukukhuphula izinga kumdlalo wokuqala we-day/night Youth ODI ekhaya
I-Coca-Cola South Africa U19s akulungele ukwakhela ekunqobeni kwayizolo ngama-wicket angu-10, nange-bonus-point bedlala ne-Namibia ngomunye umdlalo ophezulu uma bebhekana ne-England kumdlalo wabo wokuqala we-day/night ekhaya kwi-Cricket South Africa (CSA) Youth One-Day International Triangular Series e-Senwes park ngeSonto.
Umdlali ovula ngokushaya, u-Matthew Breetzke ukubhekile ukudlala ngaphansi kwagesi kumdlalo wama-U19 futhi ujahile ukubona ukuthi adlala nabo bazobhekana kanjani nenselelo entsha.
“Ngicabanga ukuthi kuningi ukujabula kuyela emdlalweni wakusasa ngoba abadlali abaningi abakaze badlale ngaphansi kwagesi,” kusho u-Breetzke. “Kuzoba yinto entsha futhi njengoba kusondela indebe yomhlaba kanye neminye imidlalo yama-day/night, amalungiselelo amahle lawa.”
Lomdlali oneminyaka engu-19 wase-Port Elizabeth usenawo umdlalo we-First Class edlalela ama-Warriors, kodwa ukujabulele ukubuyela kumdlalo kulelizinga futhi uthemba ukuthi angadlala indima ekunqobeleni iqembu lasekhaya i-series. Yena (u-Breetzke 51*) nomdlali avula naye, u-Jiveshen Pillay (31*) badlala umdlalo wabantu abakhulile bejaha u-91, bafinyelela khona kuma-overs angu-16.2 balinqobela kahle iqembu.
“Ngokombono wami, bengikulindele ukubuyela eqenjini lama-U19, ngiyakujabulela ukudlala lapha futhi siphume kahle okokuqala. Ngikuthandile ukushaya no-Jiveshen (Pillay) siphinde sathola enye i-partnership engu-50 futhi ngikubhekile okunye kwi-series futhi ngithemba ukuthi ngingadlala indima kwimpulelelo yeqembu.”
Nokho ebekujabulele ukunqoba kweqembu lidlala ne-Namibia, u-Breetzke ukholwa ukuthi iqembu lizodinga ukukhuphula izinga uma sebebhekana neqembu “elinamandla amakhulu” i-England ngeSonto. Uthe iqembu kuzomele lenze kahle kuzona zontathu izigaba futhi bagxile kulokhu abakwaziyo uzuze bathole umphumela omuhle.
“Ngicabanga ukuthi abaphosa i-spin bazodlala indima enkulu kule-series ngoba ama-wicket ahamba kancane lapha,” esho eqhubeka. “Kuzomele zidlala ikhilikithi enhle esayidlala kumdlalo wokuqala, kodwa ezingeni eliphezulu uma sibhekana ne-England kusasa. Uma senza esikwaziyo kahle futhi sikhuphula nezinga ekushayeni kwethu, ukuphosa nokuvimba, nginesiqiniseko sokuthi sizobe siyilungele inselelo.”
Ibhola lokuqala lizophoswa ngo-14:00 e-Senwes Park Stadium. Ukungena enkundleni kumahala i-series yonke. Ukusakazwa kungatholakala ku-www.cricinfo.com futhi i-scoring izobe ikhona ezindaweni zokuxhumana ze-CSA u-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
u-Coetzee no-Molefe bahlelela i-SA u19 ukunqoba nge-bonus-point u-Van Tonder ufuna ukucacisa kumdlalo wokuqala we-Youth Tri-Series Molefe uthatha ama-wicket amahlanu kumdlalo wesibili oqedwe imvula u-Van Noordwyk uthatha okuhle emdlalweni wokuzilungiselela omiswe imvula i-CSA imemezela iqembu lama-U19 le-triangular series ne-England ne-Namibia Ukuhlulwa i-West Indies kwi-U19 series kumlimazile u-Mahatlane u-Breetzke ushaya ikhulu kodwa i-West Indies inqoba i-U19 series i-South Africa Under-19 ibheka ukushaya okufanayo West Indies ilinganise i-series ePietermaritzburg uMahatlane: Okuhle kudlula okubi i-West Indies ilinganisa i-series yama-U19